Ra’iisal wasaare kuxigeenka dalka oo lakulmay Hobalada Waaberi | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Ra’iisal wasaare kuxigeenka dalka oo lakulmay Hobalada Waaberi
Ra’iisal wasaare kuxigeenka dalka oo lakulmay Hobalada Waaberi
Mudane Mahdi Max’ed Guuleed Qadar ra’iisal wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya oo ay wehliyaan wasiirada maaliyaddda warfaafinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ayaa booqasho kormeerey xarunta fanaaniinta Hobolada Waaberi ee magaalaad Muqdisho.
Hobalada qaranka Waabari ayaa waxaa ay soo bandhigeen suugan ka tarjumaysa ahmiyadda ay leedahay wadaniyadda, sugidda amniga,la dagaalanka musuqa iyo qabyaalada oo aywaddo Xuukumadda.
Maareyaha Golaha murtida iyo madadaalada Abwaan Cabdi Dhuux ayaa sheegay in kormeerka uu xarunta kmg ay ku shaqeeyaan uu ku yimid ra’iisul wasaare kuxigeenka ay tahay mid dhiiro gelinaysa howlahoodi shaqo.
Agaasimaha Guud ee Wasaarada Warfaafinta Cabdiraxmaan Sh Yuusuf Al-Cadaala ayaa tilmayay in Dowr muuqda ay ka qaateen Hobalada jiheynta dadka Somaaliyeed islamarkaana ugu baaqay Dowladda in ay ka faa”iideysato kaalinta Hobolada Waaberi ay ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada.
Wasiirka Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng Yarisiow) Ayaa sheegay in fanaaniinta ay wadaan wacyigelin ku saabsan hortaminta barnaamijka Dowladda , waxaa uu sidoo kale ku booriayay in ay sii wadaan howlaha ay u hayaan bulshada.
Ugu dambeyn ra’iisal Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Mudane Mahdi Maxamed Guuled(Qadar )ayaa balan qaaday in Dowlada Federaalka ay si dhow ah ay ugu warqabto fanananiinta isagoo Hobalada u jeediyay in ay labo jibaaran hagidda dadka bulshada Soomaaliyeed.
Talaabadan ayaa waxaa ay qeyb ka tahay wacyagalinta Bulshada Soomaaliyeed ee dhinac fanka iyo suuganta si bulshada Soomaaliyeed looga wacyageliyo dhibaatada ay leedahay qabyaalada musuq maasuqa,iyo fikiradaha qaldan ee kooxda nabad diidka Shabaab.
Previous articleIn kabadan 100 maxaabiis ah oo laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho
Next articleAwaamiir cusub oo ka soo baxday dowladda Soomaaliya